के साँच्चै विश्व परिवर्तित हुनेछ ?- विविधा - कान्तिपुर समाचार
के साँच्चै विश्व परिवर्तित हुनेछ ?
कोरोना पछिको विश्व फेरिनलाई समाज फेरिनु पर्छ, सोच परिवर्तित हुनु पर्छ ।
चैत्र २८, २०७६ शिशिर वैद्य
काठमाडौँ — चीनबाट सुरु भएको संक्रामक रोग विश्वभर फैलिन थालेपछि विश्व स्वास्थ संगठनले कोरोना भाइरस संक्रमणलाई महामारी घोषणा गर्‍यो । र यससँग लड्न सबै राष्ट्रहरुलाई एकजुट हुन आव्हान गर्‍यो ।
यो आलेख लेख्दै गर्दासम्म यो महामारीले झण्डै ९५ हजार मानिसको ज्यान लिईसकेको छ र १५ लाख यसबाट संक्रमित भएका छन् । विश्वका २०८ देश यो महामारीको सामना गरिरहेका छन् ।
विद्वानहरु भन्दैछन्— विश्व नै ठप्प बनाएको यो महामारी पछि विश्व फरक हुनेछ । इतिहासको पानामा यो महामारीले नयाँ अध्याय सुरु गर्नेछ । के साँच्चै कोरोना महामारी पछिको संसार फरक हुनेछ ? के संसारको इतिहास कोरोना अघि र पछि भनेर छुट्टिनेछ ? के संसार वास्तवमै रोकिएको हो त ? के कोरोना महामारी विश्वका लागि ‘रिफ्रेस बटन’ हो ?
द्वन्द्व, हिंसा, हातहतियार र प्रविधिको प्रतिस्पर्धामा लिप्त विश्व अहिले ठप्प छ । धर्म र जातिको सर्वोच्चताका लागि भाँडिदै गएको समाज, सम्पन्न र विपन्नबीच बढ्दै गएको खाडलजस्ता समस्याले ग्रस्त विश्वलाई कोरोना महामारीले के साँच्चै पाठ सिकाउला त ? बन्दाबन्दीले ठप्प बनेको दिनचर्यामा यस्तै प्रश्नहरुको उद्वेगले मन निकै अशान्त हुने गरेको छ ।
मानव इतिहासले महामारीका थुप्रै रुप भोगेको छ । इतिहासमा महामारी बनेर फैलिएका यस्ता थुप्रै विपद्ले हामीलाई केही न केही पाठ सिकाएको छ । तर समयक्रममा ती पाठहरु भुल्ने गर्दा हामी पटकपटक महामारीका फेरिएका रुपलाई भोग्न वाध्य हुने गरेका छौं ।
विभिन्न समयक्रममा फैलिएका प्लेग, फ्लु, इन्फ्लुएन्जा, कलेरा, एड्सजस्ता संक्रामक रोगले मानवजातिलाई निकै पिडा दियो । केही अर्थमा हामी भाग्यमानी पनि छौं । किनकि, हामीसँग अहिले जाँच गर्न प्रविधि छ । सूचना आदानप्रदान गर्न इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल छ । सोचौं त ती लाखौं मानिस जसले सयौं वर्षअघि महामारी भोगेका थिए, कसरी झेले होलान् तिनले ति महामारी जो बाँचे ?
महामारीसँग जुध्न राज्य सञ्चालकहरु (तात्कालीन र वर्तमान) को भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । आफ्ना नागरिक र समाजलाई महामारीविरुद्ध सचेत पार्न नसक्दा राष्ट्रले भोग्नुपर्ने क्षतिको वर्तमान उदाहरण बनेको छ अमेरिका, इटाली, स्पेन लगायतका विभिन्न राष्ट्रहरु । उदाहरण चीन, जापान, कोरिया, ताइवानलाई पनि लिन सकिन्छ । जसले महामारीविरुद्ध लड्न लकडाउन लगायतका अन्य व्यापक तयारीलाई तिब्रता दिए । जनतालाई सचेत र सजग बनाए । संक्रमण आशंका गरिएकाहरुको अनिवार्य जाँच गराए । संक्रमितलाई छुट्टै राखे, उपचार गरे । त्यसैले ती देशहरुमा अहिले संक्रमण निर्मूल नभए पनि बढेको छैन ।
हाम्रो वास्तविकता फरक छ । प्रचार जतिसुकै चर्को गरे पनि तयारी फितलो रहेको प्रमाणित भइसकेको छ । सूचनाप्रणाली गएगुज्रिएको छ । उदाहरण हो कतार र अरबबाट आएका यात्रु खोज्न परेको सकस । विमानस्थलबाट प्रवेश गर्ने केही सय यात्रुको सूचना सही ढंगले राख्न नसक्ने राज्यले दक्षिणी नाकाबाट प्रवेश गरेका हजारौँ नागरिकको सूचना कसरी राखोस् ? विदेशबाट आएका जोकोहीलाई १४ दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने प्रावधान बनेको छ । तर पालना गराउन राज्य सक्षम नहुँदा जोखिम बढेको छ ।
काठमाडौँबाहेक जिल्लाहरुमा क्वारेन्टाइनका लागि बनाइएको स्थानको अवस्था गएगुज्रिएको छ । राज्यले आफ्नो क्षमता देखाउने समय हो अहिले । तर जनताले साथ दिए पनि राज्यले अपेक्षित काम गर्न सकेको छैन । बरु नागरिक सबै घरघरमा ठप्प भएको मौकामा राज्य सञ्चालकहरु र केही व्यापारी भ्रष्टाचार उन्मुख भएका छन् ।
विमानबाट आउने र नाकाबाट प्रवेश गर्ने नागरिक राज्यका लागि एकै हुनुपर्ने हो । तर राज्यको व्यवहारमा विभेद देखिएको छ । नाका पारि बसेर ‘आफ्नो जनता घर छिर्न दे भन्दै चिच्याइचिच्याइ कराउनुपर्ने वातावरण बन्नुले राज्यको विभेदकारी व्यवहार र विपत् व्यवस्थापनको अक्षमता छर्लङ्ग बनाएको छ ।
विश्व अहिले ठप्प छ । जताततै बन्दाबन्दी छ । कार्यालयहरु, विद्यालयहरु, कलकारखानाहरु सब बन्द छन् । अर्थात् विश्वको सामाजिक र आर्थिक क्रियाकलाप रोकिएको छ । यसको असर अनुमान गरेभन्दा भयावह हुनसक्ने प्रक्षेपण विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ/संस्थाले गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा राज्य सञ्चालकहरु चनाखो नहुने हो भने हामीजस्तो आर्थिकरुपमा पिछडिएको देशको अवस्था भयावह हुनसक्ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।
हाम्रा लाखौँ दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी काम र अवसरको खोजीमा अरब, अमेरिका, युरोप, भारत लगायतका देशमा छन् । आर्थिक अवसरका लागि उर्वर यी देशहरु अहिले कोरोना संक्रमणको चपेटामा नराम्रोसँग फसेका छन् । यसको सिधा असर रेमिट्यान्समा पर्ने पक्का छ । रेमिट्यान्सले धानेको हाम्रोजस्तो राष्ट्रको अर्थतन्त्र के होला ? डामाडोल ।
विश्व अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने अमेरिका, युरोपजस्ता देशहरुको आर्थिक अवस्था नै डामाडोल हुनसक्ने भएपछि यसको असर विश्वव्यापी हुनेछ । तर अर्थतन्त्रभन्दा माथि हुन्छ समाज र सामाजिक मूल्यमान्यता ।
यो महामारीपछि सामाजिक मूल्यमान्यता फेरिनेछ ? के विश्व साँच्चै फरक हुनेछ ? हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै साँच्चै नयाँ विश्व प्रणालीको आवश्यत्तकता भएकै हो त ? यी प्रश्नको जवाफ आउन सहज छैन । नत सामाजिक मूल्यमान्यता परिवर्तित हुन सहज छ । कोरोना संक्रमण फैलिन थालेपछि विश्वभर हात मिलाउने, अंकमाल गर्नेजस्ता व्यवहारमा परिवर्तन आएको छ । सामाजिक र व्यक्तिगत दूरी राख्ने चलन बढेको छ । साबुन लगाएर मिचीमिची हात धुनु पर्छ भन्ने थेगो नै बनेको छ । मास्क लगाउनु पर्छ भन्ने चेतना थपिएको छ । सामुहिक भेटघाट घटेको छ । यी सब व्यवहार बन्दाबन्दीका कारण बदलिएका हुन् ।
तर बन्दाबन्दीकै दौरान पनि सामुहिक कार्यक्रम नभएको होइन । सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लामा मनाइएको मेलाको तस्बिर बन्दाबन्दीको अर्थ गाउँसम्मका जनतालाई बुझाउन सरकार असमर्थ भएको प्रमाण हो । लकडाउन उल्लंघन गर्दै घरबाहिर निस्कनेहरुको संख्या नघट्नुले संक्रमण फैलिन र फैलाउन सक्ने संभावना बढ्छ । यी दृष्यहरुले कोरोनापछि समाज परिवर्तित भइहाल्छ, विश्वको रुपरेखा फेरिनेछ भन्ने सोचाइलाई चुनौती दिएको छ ।
कोरोनापछि नेपालका दूरदराजमाका मानिसहरु कामको खोजीमा भारत जान छाड्लान ? दिल्लीका होटलहरुमा नेपालीहरु काम गर्दै गरेका नभेटिएलान् ? अमेरिका प्रतिको आकर्षण घट्ला ? अल्पसंख्यकहरुले समान अधिकार पाउलान् ? गोरा र कालाको भेद मेटिएला ? वादहरुको द्वन्द्व साम्य होला ? जातीय र धार्मिक युद्धहरु साम्य होलान्् ?
महामारीले न गोरा चिन्छ न काला । न हिन्दु चिन्छ न मुस्लिम र इसाई । न जात चिन्छ न वर्ग । न यो धन हुनेले रोक्न सक्छ न गरिब भनेर यसले छाड्छ । कोरोना पछिको विश्व फेरिनलाई समाज फेरिनु पर्छ, सोच परिवर्तित हुनु पर्छ । हात धुन जान्नु र मास्क लगाउन जान्नु नै समाज परिवर्तित हुने संकेत होइनन् ।
हो, लाखौं मानिस मर्ने संकेत देखिईसकेको छ । करोडौं संक्रमित हुनसक्ने सम्भावना बढ्दैछ । मानिस मानिसबीच कोरोनाको आशंकाको प्रतिशत बढ्दै जानुले सामाजिक मूल्यमान्यतालाई भने पक्कै असर गर्नेछ । सामाजिक मूल्यमान्यतामा असर परेपछिको विश्व भने अवश्य फरक हुनेछ । प्रकाशित : चैत्र २८, २०७६ २०:३६
२ डिसेम्बर १९६० का दिन निरञ्जनगोविन्द वैद्य बेइजिङ पुगेका थिए । बेइजिङमा उनले माओसँग भेटे । उक्त भेटको स्मरण गर्दै वैद्यले लेखेका छन्(, ‘डिसेम्बरको महिना, पेकिङ हिउँले ढपक्क छोपेको थियो । हिमपातले सहर पूरै सेतो देखिएको थियो । यो सहरमा माओ भेटेपछि मेरो मुटुको चाल अचानक बढ्न थाल्यो ।’
फाल्गुन १७, २०७६ शिशिर वैद्य
काठमाडौँ — थुप्रै पुस्तकले भरिएको भण्डारजस्तो देखिने एउटा बेनाम पुस्तकालय । अव्यवस्थित र छरपस्ट पुस्तकहरू । केही पुस्तक र्‍याकमा ठडिएका छन् तर पुस्तक क्रम, संकेत चिह्न केही छैनन् । अघिल्लो दिन देखेका पुस्तक हराइरहेका छन् । पुराना पुस्तकका गाता च्यातिन थालेका छन् ।
पत्रिकाका अक्षर खुइलिरहेका छन् । कति पुस्तकका बाइन्डिङ खुस्किएर दुई–तीन टुक्रा भएका छन् । तिनै छरपस्ट पुस्तकको भीडमा भेटिएको थियो— बाले लेखेको एउटा सानो पुस्तिका । शीर्षक थियो, ‘विश्व–क्रान्तिका महान् शिक्षक अध्यक्ष माओ : आमने–सामने’, लेखक– निरञ्जनगोविन्द वैद्य । सन् १९८४ मा पटनाबाट प्रकाशित जनपक्षीय पत्रिका ‘संस्कृति और कथान्तर’ ले छापेको थियो, चिनिया क्रान्तिका महानायक माओत्से तुङसँग बाले भेटेको संस्मरण । त्यही साल छापिएको रहेछ, त्यो सानो पुस्तिका ।
सन् १९६०, ७ नोभेम्बरका दिन बा मस्को पुगेका थिए, सोभियत संघको ट्रेड युनियनको निमन्त्रणामा । सोभियत ट्रेड युनियन कंग्रेसको दुई हप्ताको आतिथ्यपछि उत्तर कोरिया हुँदै अखिल चीन ट्रेड युनियन फेडेरेसनको निमन्त्रणामा उनी चीन पुगे । जीवनको अविस्मरणीय भ्रमणमा उनले विश्वका विशिष्ट नेताहरूसँग भेट्न पाए । तीमध्ये थिए— चिनियाँ क्रान्तिका महानायक माओत्से तुङ र उत्तर कोरियाका सुप्रिम कमान्डर किम इल सुङ । तत्कालीन जननिर्वाचित सरकारले उनलाई यो भ्रमणमा जान रोक्ने व्यापक प्रयास गरेको थियो । बा बेला–बेला सुनाउनुहुन्थ्यो हामीलाई यसबारे । ‘वैद्यलाई पासपोर्ट नदिनू,’ ठाडो आदेश थियो सरकारको । स्मृतितिर पस्दै बा भन्थे, ‘अनेक ढोका चहारेपछि बल्ल फुकुवा भएको थियो पासपोर्ट ।’
तर त्यही साल र त्यही महिना पार्टी–महासचिव केशरजंग रायमाझी, कमर शाह, हिक्मतसिंह भण्डारी, कृष्णराज वर्मा र शम्भुराम श्रेष्ठ सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डल सोभियत संघको भ्रमणमा थियो । नोभेम्बर महिनाको पहिलो सातादेखि मस्कोमा सुरु हुने विश्वका ८१ राष्ट्रका कम्युनिस्ट तथा मजदुर पार्टीको सम्मेलनमा सहभागी हुन सो प्रतिनिधिमण्डल मस्को पुगेको थियो । यसअघि सन् १९६० अक्टोबर महिनाको अन्तिम साता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा सोभियत संघको कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटिले सम्मेलनमा सहभागिताका लागि निमन्त्रणा पठाएको थियो । आमन्त्रणबारे निर्णय गर्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर महासचिव रायमाझीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय भएको थियो ।
२ डिसेम्बर १९६० मा बा बेइजिङ विमानस्थल ओर्लिए । ओर्लिएलगत्तै उनले फेडेरेसनका साथीहरूलाई माओसँग भेट्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । ‘चीन पुगेर अध्यक्ष माओसँग भेट्न पाइएन भने त मेरो भ्रमण असफलजस्तै हुन्छ नि,’ फेडेरेसनका साथीसामु ढिपी कसेका थिए उनले । तर, फेडेरेसनका साथीहरू कसैलाई पनि अध्यक्ष माओ कहाँ छन् भन्ने अत्तोपत्तो थिएन । तर, उनीहरूले सम्बन्धित अधिकारीसम्म बाको हार्दिक इच्छा पुर्‍याउने आश्वासन दिए ।
फेडेरेसनको कार्यक्रम एक हप्ता चल्यो । त्यसपछि चिनियाँ क्रान्तिमा ऐतिहासिक महत्त्व बोक्ने सहरहरू घुमघाम । भ्रमण अन्तिम प्रहरमा थियो । उनी ट्रेड युनियनका अध्यक्ष र वन विभागका मजदुर युनियनका अध्यक्षसँग बसेर कुराकानी गरिरहेका थिए । फोनमा कसैले ट्रेड युनियन अध्यक्षलाई तुरुन्त आउनू भन्ने सन्देश दिए । त्यसको केही क्षणपछि फोनको घण्टी फेरि बज्यो ।
सँगै रहेका उपाध्यक्षले फोन उठाए । फोनमा कुरा गरिसकेपछि उपाध्यक्षले हर्षित मुद्रामा भने, ‘हाम्रो केन्द्रीय समितिका एक प्रमुख नेताले तपाईंसँग भेट्ने चाहना गर्नुभएको छ, जाऊँ ।’ कसलाई भेट्न जाने भन्ने जानकारीबिनै उपस्थित सबै त्यहाँबाट हिँडेका थिए । माओसँगको आफ्नो भेटबारे स्मरण गर्दै बाले लेखेका छन्(, ‘डिसेम्बरको महिना, पेकिङ हिउँले ढपक्क छोपेको थियो । हिमपातले सहर पूरै सेतो देखिएको थियो । हाम्रो गाडी बिस्तारै एक विशाल क्याम्पभित्र प्रवेश गर्‍यो ।
एउटा प्राचीन पाराको अजंगको ढोकाअगाडि पुगेर गाडी रोकियो । ढोका अघिल्तिर दुई सुरक्षाकर्मी देवदारको वृक्षझैं हलचलबिना उभिइरहेका थिए । हामी एक भव्य हलमा प्रवेश गर्‍र्यौं । हलको वातावरण चकमन्न थियो तर सुन्दरता वर्णन गरिसाध्यै थिएन । केही क्षण पहिले हामीसँग छुट्टिएका ट्रेड युनियनका अध्यक्ष हलको एकछेउमा थिए । उनी देखेर म दंग परें । मलाई हेरेर मुस्कुराउँदै उनले कुर्सीमा बस्न संकेत गरे ।
दुई–तीन मिनेटपछि एक जना कमरेडले आएर मेरो कानमा सुटुक्क भने— अध्यक्ष माओ आउँदै हुनुहुन्छ । ती शब्द सुन्नेबित्तिकै मेरो मनमस्तिष्क रोमाञ्चित भयो । शरीरमा एक प्रकारको कम्पन महसुस भयो । हंसले काम नगरेजस्तो भयो । हलको पूर्वतर्फको कोठाबाट प्रवेश गर्दै गरेका अध्यक्ष माओलाई देखेर मेरो मुटुको चाल अचानक बढ्न थाल्यो । हँसिलो मुहार, हृष्टपुष्ट शरीर, अग्लो कद । अध्यक्ष माओसँग भेट्ने उत्कट चाहनाले मूर्तरूप पाइरहँदा म भने मूर्तितुल्य बनेको थिएँ । माओ नजिक आइपुगेर हात मिलाउँदै मलाई हेरेर मुस्कुराइरहँदा मेरो शरीर, मुटुदेखि नै चिसो बनेको थियो । मस्तिष्क शून्य बनेको थियो । शून्यतामा हराएको त्यो क्षणमा मैले अध्यक्ष माओसँग मिलाउँदै गरेको हात छोड्नै बिर्सेछु । मलाई सँगैको कुर्सीमा बस्न आग्रह गर्दै माओ कुर्सीमा बसे ।’
सोभियत संघमा ट्रेड युनियन कंग्रेसको सम्मेलनमा भाग लिएर चीन पुगेका बासँग माओको पहिलो प्रश्न थियो— सोभियत संघ भ्रमणको सफलताका विषयमा । नेपालका मजदुर–किसान र अन्य श्रमजीवी जनताबारे माओ निकै जिज्ञासु भएर प्रश्न गरिरहेका थिए भने बा एक असल कार्यकर्ताका रूपमा जवाफ दिइरहेका थिए । वार्ताकै दौरान माओले अचानक उनलाई सोधे, ‘तपाईंले चीनमा के–के देख्नुभयो, अनि कस्तो लाग्यो चीन यहाँलाई ?’ बाको जवाफ थियो, ‘चीन एक विशाल देश हो, चार–पाँच दिनको भ्रमणमा सबै कुरा हेर्न र बुझ्न सम्भव कहाँ छ र ? तर, म जहाँ जहाँ पुगें, चीनको प्रगति देखेर निकै प्रभावित भएको छु ।’
बाको उत्तर सुनेर माओले मुस्कुराउँदै भनेका थिए, ‘पक्कै पनि हाम्रा कामरेडहरूले तपाईंलाई राम्रो–राम्रो ठाउँ मात्रै घुमाए होलान्, त्यसैले तपाईं यसो भन्दै हुन्छ । तर, तपाईंले देखेको चीन र वास्तविक चीन फरक छ । थुप्रै कमजोरी र समस्या छन् यहाँ । चीनलाई विकसित बनाउन हामीलाई अझै निकै मिहिनेत गर्नु छ । हामी यसका लागि दृढ भएर लागिरहेका छौं ।’
नेपालमा प्रजातान्त्र स्थापनाका लागि भएको आन्दोलनदेखि किसान आन्दोलन, मजदुर आन्दोलन, कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना, कम्युनिस्ट आन्दोलनलगायत विविध विषयमा माओसँग लामो छलफल चल्यो— संस्मरणमा उल्लेख छ । माओले पनि चिनियाँ क्रान्तिको उद्गमदेखि विजयसम्मका प्रमुख घटना संक्षेपमा उनलाई सुनाए । क्रान्तिलाई विजयसम्म पुर्‍याउन दुई पृथक् दुश्मनसँग जुध्नुपरेको बताउँदै माओलाई उद्धृत गर्दर् ैबाले लेखेका छन्, ‘एकातर्फ जापानी साम्राज्यवादी फौजको आक्रमण र दमन व्यापक हुँदै थियो भने अर्कोतर्फ देशभित्रै देशद्रोहीहरूको बिगबिगी बढ्दै गएको थियो ।
विदेशी फौजसँग लड्नुपर्ने अप्ठ्यारो समयमा देशभक्त कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू देशद्रोहीहरूको विभिन्न जालझेलसँग जुध्न बाध्य भइरहेका थिए । एकदमै खतरनाक र जटिल अवस्थाको सामना गर्दै हामीले क्रान्तिदेखि विजयसम्मको लामो अभियान पार गर्‍यौं । यसमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका सबै कार्यकर्ताको असाधारण त्याग र अपूर्व बलिदान रहेको छ ।’
कुराकानीकै क्रममा बाले माओलाई भनेका थिए, ‘मार्क्स, ऐंगेल्स, लेनिन र स्तालीन हामीबीच छैनन् । तर, आज यहाँसँग भेटेर चिनियाँ क्रान्तिका विषयमा प्रत्यक्ष सुन्न पाउँदा र कुरा गर्न पाउँदा आफूलाई निकै भाग्यशाली महसुस गरिरहेको छु । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दृढ भएर लाग्न तपाईंसँगको भेटले मलाई अझ उक्साएको छ ।’ माओको जवाफ थियो, ‘मार्क्स, ऐंगेल्स, लेनिन र स्टालिनका म पनि एक साधारण शिष्य मात्रै हुँ । सोभियत संघसँग हाम्रा केही सैद्धान्तिक मतभेद छन्, तर ती चाँडै नै निर्मूल हुनेमा म पूर्ण आशावादी छु ।’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जनरल सेक्रेटरीलाई आफ्नो लालसलाम सुनाइदिने आग्रहसहित माओले फेरि कुनै अवसरमा भेट्ने बताउँदै कुराकानी टुंग्याए । दुईबीचको सुमधुर छलफलले माओको व्यस्त समयको एक घण्टा खाइसकेको थियो । समय लामै बितेको संकेत गर्न बेलाबेला सहायकहरू आउँथे । तर, माओ इसाराले पख भन्थे । भेटघाट टुँग्याउँदै माओले ढोकासम्म पुर्‍याउन आएको क्षण सम्झिँदा मनमा एक प्रकारको हलचल भएको उल्लेख गरेका छन् बाले ।
सोभियत संघ र चीनको भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कन नयाँ दिल्ली विमानस्थलमा ओर्लिंदा देशको परिस्थिति बदलिइसकेको थियो । पुस १ को घटनाले राणाहरूसँग ज्यानको बाजी थापेर ल्याएको प्रजातन्त्र फेरि राजाको हातमा पुगिसकेको थियो । कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका थुप्र्रै साथी गिरफ्तार भएका थिए भने कोही भूमिगत भइसकेका थिए । देशमा सैनिक शासन सुरु भइसकेको थियो । भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रहरूबाट सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू भारततर्फ पलायन भइरहेका थिए । पार्टीहरू प्रतिबन्धित गरिएको थियो । मुलुकमा गम्भीर स्थिति खडा भएको थियो ।
प्रकाशित : फाल्गुन १७, २०७६ १२:०२